महरा, नाजायज सम्बन्ध र यौन दुर्व्यसन | Kendrabindu Nepal Online News
१४ आश्विन २०७६, मंगलवार १६:५९
अपत्यारिलो र सुन्ने बित्तिकै विश्वास गरिहाल्न नसकिने ‘बलात्कारको आरोप’ सार्वजनिक भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि उनकै महिला मित्र रोशनी शाहीद्वारा लगाइएको यो आरोप नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा उच्च पदासीन व्यक्तिलाई लागेको आरोप हुन सक्छ । परापूर्व कालमा पनि यस्ता आरोप लागेर राजामहाराजाहरू काटिनु परेका कथाहरू हाम्रा पाठ्यक्रममा अझै बाँकी नै छन् ।
अहिले यो लेख लेख्दालेख्दै महरालाई सभामुख र संसद् सदस्य समेतबाट राजीनामा दिनको लागि पार्टीले निर्देशन दिए बमोजिम उनले राजीनामा पेस गरेका छन् । उनको राजीनामाले कहीँ न कहीँ उनीबाट अपराध भएको र त्यो उनले स्वीकार गरेको सङ्केत मिलेको छ तर उनले सशर्त राजीनामा पेस गरे । छानबिन नसकिउन्जेलको लागि मात्र भनेर उनले पेस गरेको राजीनामा नै विवादमा परेको छ । के उनी आफू निर्दोष छु भन्नेमा ढुक्क छन् त्यसैले त्यस किसिमको राजीनामा लेखे ?
अर्को कुरा, उनले बलात्कारजन्य अपराध गरेका हुन् भने यो नै उनीबाट भएको पहिलो अपराध होला त ?
जनयुद्धमा कति महिला लडाकुहरूको शोषण गरे होलान् । सुराकीको नाममा पक्राउ परेका मान्छेका छोरीबुहारी र श्रीमतीहरू महराबाट बलात्कृत भएनन् होला र ? अपहरण गरेर हत्या गरिएका महिला प्रहरीहरू लगायत युद्धको समयमा महराको सङ्गतमा आएका को को उनको कर्तुतको सिकार भए होलान् ?
जनयुद्धमा आउनुअघि उनी शिक्षक थिए । उनका समकक्षी, विद्यार्थी या आफू मातहतका कति स्टाफहरू उनीद्वारा प्रताडित भएका थिए होलान् ?
महरा साँच्चैको यौन दुर्व्यसनी हुन सक्छन्, बलात्कार नै उनको सम्बन्ध स्थापित गर्ने तरिका भएको हुन सक्छ अथवा यौनिक रूपमा महरा अति अराजक छन् । देशकै सबैभन्दा उच्चतम त सम्माननीय पदमा आसीन व्यक्तिको अन्तरङ्ग सम्बन्धहरू अत्यन्तै गोपनीय रहनु पर्दछ ।
देशकै जिम्मेवारी बोकेको मान्छे यौनजन्य, त्यो पनि नाजायज कुरामा अल्झिएको कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मर्यादित देखिँदैन । त्यसमाथि ‘नाजायज सम्बन्ध’ आफैमा कानुनले दण्डनीय मानेको कुरा हो । जसले जनतालाई यसो गर्न हुँदैन भनेर सिकाउनु पर्ने हो उही व्यक्ति नै नाजायज सम्बन्धमा अल्झँदै फस्दै जानु सुखद कुरा हुन सक्दैन । नाजायज सम्बन्ध बारेको कानुन पारित गर्दै गर्दा महराले आफ्ना सम्बन्धहरू कति गैरकानुनी छन् भनेर सोच्न किन भ्याएनन् होला ?
अवैध सम्बन्धपछि बलात्कारको आरोप अहिले सबैभन्दा खतरनाक हतियार बनेको छ । रोशनी शाहीसँग सभामुख महराको अट्ठाईस वर्षअघिदेखि चिनाजानी रहेको र लामो समयदेखि शारीरिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित हुँदै आइरहेको कुरा पीडित महिलाको बयान सुन्दा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले भने ती महिलाको सहन गर्नसक्ने शक्तिले सीमा नाघेपछि आफ्नो बचाउमा महिलाले सत्य बोल्दा यो नाजायज सम्बन्ध बलात्कारमा परिणत भएको हुनु पर्दछ भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि प्रशस्तै देखिएका छन् सामाजिक संजालमा, तर के नाजायज सम्बन्ध छ भन्दैमा ‘बलात्कार गर्ने छुट’ कसैले पाउँछ र ?
त्यस किसिमको नाजायज सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकिरहनको लागि धेरै कुराहरूले लगातार साथ दिइरहेको हुनुपर्छ । जस्तै:
रोशनी शाहीको लोग्नेसँगको सम्बन्ध
पीडित भनिएकी रोशनी शाही लोग्नेसँग एकाघरमा बस्दाबस्दै सभामुख महराले लामो समयसम्म उनीसँग कसरी सम्बन्ध बनाइरहन सके ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । या त रोशनीका श्रीमानले यो कुरा थाहै पाएनन् या कुनै प्रलोभनमा अथवा शक्ति केन्द्रसँगको त्रासको कारणले उनले आफ्नी श्रीमतीको नाजायज सम्बन्धमा आँखा चिम्लेर बसिदिए ? पदीय दुरुपयोग गरेर महराले डर त्रास देखाएर शोषण गरेका हुन् भने बलात्कारमाथि उनले पदीय दुरुपयोग समेत गरेको ठहर्नेछ ।
अर्को कुरा के हुनसक्छ भने सभामुखबाट आरोप लगाउनेले लगातार केही न केही फाइदा उठाइरहेका पो थिए कि ? नत्र हरेक पटक सभामुख आउँदा रोशानीका श्रीमान् बाहिर हुन्थे या सभामुख आउने भनेपछि उनी आफै बाहिर निस्केर त्यो स्लट खाली गरिदिन्थे ? सुन्दा अचम्म लाग्ने कुरा हो तर निकै ठुलो फाइदा नभई या ज्यानै जाने जोखिम या त्रास नभई एकजना लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीलाई परपुरुषसँग आफ्नै घरमा बसेर रक्सी पिउने वातावरण बन्नचाहिँ दिन सक्छ र ? महराले डर त्रास देखाएर शोषण गरिरहेका थिए या अन्य प्रलोभनमा पारेर ?
पीडित रोशनी शाहीले अठचालीस सालदेखि नै महरासँग चिनाजानी रहेको बताइरहेकी छन् । यो समय भनेको अट्ठाईस वर्ष अगाडिको कुरा हो । अहिले उनका छोराछोरीहरू पनि ठूला भइसके होलान् । बढ्दो उमेरका छोराछोरीहरूको अनुभव कस्तो रह्यो होला ?
यसरी लेखिरहँदा पीडित महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको भन्ने अर्थ त नलागोस् तर कृष्णबहादुर महरा आफ्नो घरमा आउँदा आफ्नो बाबु बाहिर हिँडेको अथवा बाबु घरमा नभएको अवस्थामा कृष्णबहादुर महरा घरमा आइरहेको र आफ्नी आमाले उनीसँग बसेर रक्सी पिउँदै अन्तरङ्ग सम्बन्धहरू स्थापित गरेको त्यो अवस्था ती छोराछोरीले कसरी बिताए होलान् ?
अहिले तिनीहरूको मस्तिष्कमा विकसित भएको आफ्नी आमाप्रतिको आफ्नो बाबुप्रतिको धारणा कस्तो होला ? बढ्दो उमेरका छोराछोरी घरमै रहेको अवस्थामा त्यस किसिमका सम्बन्धहरू स्थापित हुन र तिनलाई निरन्तरता दिन सहज भने पक्कै थिएन होला ।
सम्बन्ध नाजायज भए पनि सुमधुर थियो भन्ने कुरा रोशनी शाहीले प्राप्त गर्दै आएका ‘काज सुविधा’हरूबाट पनि प्रमाणित हुँदै गएको छ । यति धेरै असहजताका बाबजुद सुमधुर रहँदै आएको सम्बन्ध अचानक बलात्कारको रूपमा परिणत कसरी भयो ? सबैभन्दा गम्भीर विषय यही हो ।
अवैध सम्बन्धहरू बलात्कारमा परिणत हुनलाई केही तत्त्वहरू सक्रिय भएको हुनु पर्दछ । जस्तै या त सभामुखका समर्थकहरूले आरोप लगाएजस्तै कुनै बाहिरी शक्तिले महराको राजनीतिक भविष्य समाप्त पारेर उनलाई धराशयी बनाउनको लागि ती महिलाको प्रयोग गरेको हुनु पर्दछ या महराको अत्याचार उनको सहनशक्तिभन्दा बाहिर गएको हुनाले सत्य बाहिर आएको हुनु पर्दछ । मानौँ कि त्यहाँ प्रपञ्च रचियो, तर के महरा उच्चतम पदमा बसिरहन योग्य व्यक्ति हुन् त ?
कारणहरू केलाउँदा यसबाट हुने नाफाघाटालाई पनि केलाउनै पर्छ । महरासँग अन्तरङ्ग सम्बन्धमा रहँदा रोशनी शाहीले प्राप्त गर्दै आइरहेको आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक र अन्य फाइदाहरू कति थिए र त्योभन्दा धेरै फाइदा हुने देखेपछि उनी महराका विरोधीहरूको लहैलहैमा लागिन् ? वा अब महराबाट केही पाउने आशा नरहेपछि आफ्नै बुद्धिविवेकको प्रयोग गरेर उनले आफ्नो सम्बन्धको हतियारद्वारा महरालाई सिद्ध्याउने खेल खेलिन् ?
जहाँ नाजायज सम्बन्धहरू मौलाउँछन् त्यहाँ विरोधीको ज्यानको समेत कुनै परवाह हुँदैन, मानप्रतिष्ठा भनेका त तपसिलका विषय हुन् । नाजायज सम्बन्ध गैरकानुनी या दण्डनीय होला तर बलात्कार जघन्य अपराध हो । नाजायज सम्बन्ध रहँदै आएको छ भन्दैमा उसैलाई बलात्कार गर्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन । महराबाट जे भयो त्यो अक्षम्य अपराध हो । उनले कानुनले तोकेको हदैसम्मको सजाय पाउनै पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा रोशनी शाही डिप्रेसनको बिरामी रहेको र दाङमा रहेदेखि नै उनमा यस किसिमका स्वभावहरू देखिँदै आइरहेको आरोप लगाउँदै महराको प्रतिरक्षामा केही महिलाहरू अझ केही जनयुद्धका पूर्व लडाकु महिलाहरूले समेत उनको विपक्षमा र महराको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको देख्न सकिन्छ । उनका लोग्नेले समेत आफ्नी श्रीमती डिप्रेसनको बिरामी रहेको बताइसकेका छन् ।
महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समाज पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको छ । उनी डिप्रेसनको रोगी भएकै कारणले यो आरोप लगाउन पुगेकी हुन् भने पनि त्यसलाई प्रचलित कानुनद्वारा पुष्टि गर्नु पर्दछ । महरा निर्दोष छन् भने अवैध सम्बन्धको हतियारको यो स्वरूप निकै डरलाग्दो हुनेछ जसले जोसुकैलाई निमेषभरमै तहसनहस पार्ने खुबी राख्दछ ।
त्यसो नभई ती महिलालाई कुनै शक्तिले परिचालन गरेको हो भने पनि पीडित भनिएकी महिलाका छोराछोरी र लोग्नेले आगामी दिनमा पाउने सामाजिक सजायको बारेमा त हामी सबै जानकार नै छौँ ।
शक्तिको प्रयोग गरेर पनि बलात्कारको आरोपबाट महरा बाहिर निस्केलान् तर जताततै अवैध सम्बन्ध बनाएर उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी बदनाम गरेका छन्, त्यो बदनामीको चोटबाट नेपाली कम्युनिस्टहरू बाहिर निस्कन असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
‘नाजायज सम्बन्ध’, durga pangeni, जनयुद्ध, डिप्रेसन, दुर्गा पंगेनी
Prevनेपालको सभामुखमाथि बलात्कारको आरोप- अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया
काँग्रेसको चियापान असोज २६ गतेNext
जनयुद्धमा मारिएकामध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु : अध्यक्ष दाहाल
धेरै मोटाउन मन छैन ? यसरी गरौँ मेन्टेन !
आज जनयुद्ध दिवस: नेकपाको कार्यक्रममा प्रचण्ड प्रमुख अतिथि, ओली नजाने